လှပတဲ့သူကို မရွေးချယ်ပါနဲ့ သင့်ဘဝကို လှပအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge လှပတဲ့သူကို မရွေးချယ်ပါနဲ့ သင့်ဘဝကို လှပအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ
လှပတဲ့သူကို မရွေးချယ်ပါနဲ့ သင့်ဘဝကို လှပအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ
ငါ ” မှား ” ရင်ငါ့ကို ”မနှိမ် ” ပါနဲ့ငါ့ကို ပြင်ပေးပါ…. ပြန်လှည့်ပြီး ” နိဒါန်းကို ”ပြောင်းလို့ မရတော့ပေမယ့်ရောက်ရာ နေရာက ပြန်စပြီး” နိဂုံး ” ကိုတော့
ပြောင်းလို့ရပါတယ် … မိဘ က သင့် ဘဝ ကိုမူရင်း မွေးပေးလိုက်တာနော်မိတ္တူ ဘဝဖြင့် အဆုံးမခံပါနဲ့ …
ဘဝ ကောင်းကို ရခဲ့တာ မဟုတ်သလိုဘဝ ဆိုးကိုလည်း ရခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဘဝ ပဲ ရခဲ့တာပါ
အဲ့ ဘဝ ကို အကောင်း အဆိုးဖြစ်အောင်တို့တတွေက ဖန်တီး လိုက်ကြတာပါ … ကျရှုံး မှာ မကြောက်ပါနဲ့မကြိုးစား ကြည့်မိမှာကိုသာကြောက်ပါ …
သဘော အကောင်းဆုံး သူတွေဟာအနှိပ်စက် အခံရဆုံး သူတွေဖြစ်နေ တတ်ပါတယ် …
သူများ ဘဝ အလင်းဆောင်ဖို့ လူတိုင်းနေမင်း ဖြစ်ချင်ကြတယ်အမှောင်ဆုံးအချိန်မှာ အလင်းဆောင်ဖို့ဘာလို့ လမင်း မဖြစ်ချင်ကြတာလဲ …
မရဖူးတာ ရချင်ရင်မလုပ်ဖူးတာ လုပ်ရမယ် … စတောင်းပန်ရဲတဲ့ သူကသတ္တိ အရှိ ဆုံးသူပါစခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူကစိတ်ဓာတ် အကြံ့ခိုင်ဆုံးသူပါစ မေ့နိုင်သူကစိတ်အချမ်းသာဆုံးသူပါ … ။
အရက်မပါဘဲ ပျော်တတ်အောင်ဖုန်းမပါဘဲ စကားပြောတတ်အောင်ခြွင်းချက် မထားပဲ ချစ်တတ်အောင်Selfie မဆွဲလဲ ပြုံးတတ်အောင် သင်ယူပါ ..
credit to orignal
လွပတဲ့သူကို မေ႐ြးခ်ယ္ပါနဲ႔ သင့္ဘဝကို လွပေအာင္လုပ္ေပးမဲ့သူကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ
ငါ ” မွား ” ရင္ငါ့ကို ”မႏွိမ္ ” ပါနဲ႔ငါ့ကို ျပင္ေပးပါ…. ျပန္လွည့္ၿပီး ” နိဒါန္းကို ”ေျပာင္းလို႔ မရေတာ့ေပမယ့္ေရာက္ရာ ေနရာက ျပန္စၿပီး” နိဂုံး ” ကိုေတာ့
ေျပာင္းလို႔ရပါတယ္ … မိဘ က သင့္ ဘဝ ကိုမူရင္း ေမြးေပးလိုက္တာေနာ္မိတၱဴ ဘဝျဖင့္ အဆုံးမခံပါနဲ႔ …
ဘဝ ေကာင္းကို ရခဲ့တာ မဟုတ္သလိုဘဝ ဆိုးကိုလည္း ရခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဘဝ ပဲ ရခဲ့တာပါ
အဲ့ ဘဝ ကို အေကာင္း အဆိုးျဖစ္ေအာင္တို႔တေတြက ဖန္တီး လိုက္ၾကတာပါ … က်ရႈံး မွာ မေၾကာက္ပါနဲ႔မႀကိဳးစား ၾကည့္မိမွာကိုသာေၾကာက္ပါ …
သေဘာ အေကာင္းဆုံး သူေတြဟာအႏွိပ္စက္ အခံရဆုံး သူေတြျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္ …
သူမ်ား ဘဝ အလင္းေဆာင္ဖို႔ လူတိုင္းေနမင္း ျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္အေမွာင္ဆုံးအခ်ိန္မွာ အလင္းေဆာင္ဖို႔ဘာလို႔ လမင္း မျဖစ္ခ်င္ၾကတာလဲ …
မရဖူးတာ ရခ်င္ရင္မလုပ္ဖူးတာ လုပ္ရမယ္ … စေတာင္းပန္ရဲတဲ့ သူကသတၱိ အရွိ ဆုံးသူပါစခြင့္လြတ္ႏိုင္တဲ့သူကစိတ္ဓာတ္ အႀကံ့ခိုင္ဆုံးသူပါစ ေမ့ႏိုင္သူကစိတ္အခ်မ္းသာဆုံးသူပါ … ။
အရက္မပါဘဲ ေပ်ာ္တတ္ေအာင္ဖုန္းမပါဘဲ စကားေျပာတတ္ေအာင္ႁခြင္းခ်က္ မထားပဲ ခ်စ္တတ္ေအာင္Selfie မဆြဲလဲ ၿပဳံးတတ္ေအာင္ သင္ယူပါ ..